ကျိတ်ကျိတ်တိုးလူပြည့်တဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ အတန်ဆုံး လှည်းတန်းက မာလာရှမ်းကော
2 Nov 2018 . 5:06 PM
မာလာရှမ်းကော စားဖူးသမျှထဲ ရန်ကုန်ရဲ့ အတန်တကာ့အတန်ဆုံးလည်း ပြောလို့ရတယ်။ လူအစည်ဆုံး လှည်းတန်းမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကာ….အို ဘာပြောကောင်းမလဲ?
အဲ့ဆိုင်လေးမှာ မာလာရှမ်းကောရယ် Mini Hot Pot ရယ်ကို အဓိကထားရောင်းတယ်။ တခြားကိုရီးယားစာနဲ့ ထိုင်းစာနည်းနည်းလေးရတယ်။
သူ့ မာလာရှမ်းကော ရောင်းပုံက ဘယ်ဆိုင်နဲ့မှ မတူဘူး။ Set လည်းမဟုတ်၊ Gram နဲ့လည်းမချိန်နော်။ ဒါပေမယ့် ဈေးက လတ်တလောစားဖူးသမျှထဲမယ် အတန်ဆုံးစာရင်းဝင်သွားတာဗျို့။
ဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့ကာ- ဈေးနှုန်းအလိုက်အထုပ်ကလေးတွေနဲ့ဗျား။ ဟုတ်တယ်။ အရွက်၊ အသား၊ မှိုတွေ၊ ရေစိမ်တွေကျ အထုပ်လေးတွေနဲ့ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ဝန်းကျင်။ အသားလုံးတွေကျ ၂၅၀ ကနေ ၅၀၀ ဝန်းကျင်။
ခေါက်ဆွဲက ၃၅၀။ ကဲ..အဲ့ဒါမှ မတန်ရင် ဘယ်ဟာတန်မတုန်း..နော့။ အရွက်တစ်ထုပ် ၂၀၀ ဆိုတာ ခပ်များများ။ အသားတွေနဲ့အသားချောင်းတွေလည်း လတ်တယ်။ တန်တယ်။ တုတ်ထိုးထားတော့ ဈေးဘယ်လောက်ဖိုးစားမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်လို့ရတယ်။
အခရာကတော့ ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့ ခပ်များများ အသားတွေ၊ အသားချောင်းတွေနဲ့ အရွက်တွေ ၃ယောက်စာ ယူချလိုက်တယ်။ ရောက်ချလာတော့ မှာတာတွေအကုန်ပါတယ်။ မာလာရှမ်းကော တစ်ပန်းကန်လုံးအမောက်ကြီး။ ကိုယ့်အကြိုက် အသားတွေချည်း ရွေးယူထားတာဆိုတော့ လုံးဝရှယ်ပဲ။ အရသာကလေ တကယ့် ဆိုင်ကြီးတွေက မာလာရှမ်းကောအရသာကွက်တိ။ နည်းနည်းတော့လေးတယ်။ ဒါလည်း အငန်လျှော့လို့ ပြောရင်ရမယ် ထင်တယ်။
အဲ့ချိန်တွက်ချလိုက်တာက ဒီလောက်ဆို တစ်သောင်းခွဲလောက်ပြေးမလွတ်ဘူးပေါ့နော်။ ယူထားတာက အသားတစ်ထုပ်၊ အသားချောင်းတွေချည်း ၁၀ချောင်းကျော်တယ်။ အရွက်တွေလည်း ရှိသမျှအမျိုးအစားစားကောင်းတာ အကုန်ယူတာ။ အပ်မှိုက ၂ထုပ်။ ပုစွန် ၄၀၀ တန်၂ကောင်။ ပုံမှန်ဆိုင်ဆို တသောင်းခွဲဝန်းကျင်ပဲ။ ကိုယ့်အကြိုက်တွေချည်းပဲကိုး။
လာချပေးတော့ ပန်းကန်ထဲမှာက ကြက်အူချောင်း၊ အသားလုံးနဲ့အသားတွေချည်းလေ။ ခေါက်ဆွဲချည်းတင် ၂ထုပ်။ ဒါပေမယ့် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘေလ်တောင်းလိုက်မှ အမ်…ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ မျက်လုံးပြူးရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအဝအပြဲ ၂ယောက်စာစားလို့ရတာကိုမှ ၆၂၀၀ တဲ့။ လုံးဝ မထင်ထားတာနော်။
မကြိုက်တာကတော့ ဂျင်းဖတ်ကြီးတွေနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဥအလုံးလိုက်ကြီးတွေပါတာပါပဲ။ စားရတာ ဖယ်နေရတာ အလုပ်တစ်လုပ်ကွယ်။ ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးတွေက အစာသွပ်အသားလုံးတွေ မရှိပါဘူးနော်။
အဲ့တော့မှ လူတွေကျိတ်ကျိတ်တိုးနေကြတဲ့အကြောင်းရင်းသိတော့တယ်။ တကယ် တန်တာတော့တော်တော်တန်တာ။ သူ့ထက်တန်တာတောင် သူ့လောက်မတန်ဘူး။ အရသာကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထဲပါတယ်။ နောက်ပြီး သန့်ရှင်းမှု။ တစ်ဆိုင်လုံးက ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး။ ဝန်ထမ်းလည်းများတယ်။ စောင့်ရတာတော့ နည်းနည်းကြာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ရတာနဲ့တော့ စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောရမယ်။
Hot Pot တော့ မမြည်းခဲ့ရဘူး။ Hot Pot ဆိုရင်တော့ ယူထားတဲ့ အချောင်းတွေကို အိုးထဲတခါတည်းထည့်ချက်ပေးတာတဲ့။ တုတ်ထိုးဟော့ပေါ့ပုံမျိုးထင်တယ်။ မာလာရှမ်းကောရော၊ Hot Pot ရော ၅၀၀၀ ဖိုးမကျော်ရင် အနှစ်ဖိုးနဲ့ အရည်ဖိုး ၁၀၀၀ ကောက်တယ်။
ဆိုင်နာမည်က “Home Mala Xiang Guo နဲ့ Mini Hot Pot” ပါတဲ့။ လှည်းတန်း အမှတ် ၃၊ ဇေယျာသီရိလမ်း။ Iceberry ဘေးကပ်ရက်လမ်းလေးထဲတင် အဆုံးထိဝင်သွားလိုက်ရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ်။ ဖုန်း-09251925955 ကိုကြိုဆက်ပြီး နေရာရှိမရှိ အရင်မေးနော်။
မာလာရှမ်းကောကို အရသာရှိရှိ၊ဗိုက်လဲအဝ၊ ဘက်ဂျက်မှစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ “Home” ဆိုတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကို အခရာကလည်း လုံးဝ Recommend ပေးပါတယ်လို့။ ဒီရက်ပိုင်းသွားမယ်ဆို နေ့ခင်းထမင်းစားချိန်နဲ့ ညနေရုံးဆင်းချိန်ရှောင်ပြီးသွားမှ နေရာရမယ့်အခြေအနေပါ။ အဲ့၂ချိန်ကတော့ လူကျိတ်ကျိတ်တိုးပဲ။
ယူတို့ လှည်းတန်းဘက်ရောက်ရင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အတန်ဆုံးမာလာရှမ်းကောကို အရသာရှိရှိ ဝင်စားကြည့်လိုက်ဦးနော်။
ကြိတျကြိတျတိုးလူပွညျ့တဲ့ ရနျကုနျရဲ့ အတနျဆုံး လှညျးတနျးက မာလာရှမျးကော
မာလာရှမျးကော စားဖူးသမြှထဲ ရနျကုနျရဲ့ အတနျတကာ့အတနျဆုံးလညျး ပွောလို့ရတယျ။ လူအစညျဆုံး လှညျးတနျးမှာလညျးရှိတယျဆိုတော့ကာ….အို ဘာပွောကောငျးမလဲ?
အဲ့ဆိုငျလေးမှာ မာလာရှမျးကောရယျ Mini Hot Pot ရယျကို အဓိကထားရောငျးတယျ။ တခွားကိုရီးယားစာနဲ့ ထိုငျးစာနညျးနညျးလေးရတယျ။
သူ့ မာလာရှမျးကော ရောငျးပုံက ဘယျဆိုငျနဲ့မှ မတူဘူး။ Set လညျးမဟုတျ၊ Gram နဲ့လညျးမခြိနျနျော။ ဒါပမေယျ့ ဈေးက လတျတလောစားဖူးသမြှထဲမယျ အတနျဆုံးစာရငျးဝငျသှားတာဗြို့။
ဘယျလိုရောငျးလဲဆိုတော့ကာ- ဈေးနှုနျးအလိုကျအထုပျကလေးတှနေဲ့ဗြား။ ဟုတျတယျ။ အရှကျ၊ အသား၊ မှိုတှေ၊ ရစေိမျတှကြေ အထုပျလေးတှနေဲ့ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ဝနျးကငျြ။ အသားလုံးတှကြေ ၂၅၀ ကနေ ၅၀၀ ဝနျးကငျြ။
ခေါကျဆှဲက ၃၅၀။ ကဲ..အဲ့ဒါမှ မတနျရငျ ဘယျဟာတနျမတုနျး..နော့။ အရှကျတဈထုပျ ၂၀၀ ဆိုတာ ခပျမြားမြား။ အသားတှနေဲ့အသားခြောငျးတှလေညျး လတျတယျ။ တနျတယျ။ တုတျထိုးထားတော့ ဈေးဘယျလောကျဖိုးစားမယျဆိုတာ ကွိုတှကျလို့ရတယျ။
အခရာကတော့ ဗိုကျဆာနတောနဲ့ ခပျမြားမြား အသားတှေ၊ အသားခြောငျးတှနေဲ့ အရှကျတှေ ၃ယောကျစာ ယူခလြိုကျတယျ။ ရောကျခလြာတော့ မှာတာတှအေကုနျပါတယျ။ မာလာရှမျးကော တဈပနျးကနျလုံးအမောကျကွီး။ ကိုယျ့အကွိုကျ အသားတှခေညျြး ရှေးယူထားတာဆိုတော့ လုံးဝရှယျပဲ။ အရသာကလေ တကယျ့ ဆိုငျကွီးတှကေ မာလာရှမျးကောအရသာကှကျတိ။ နညျးနညျးတော့လေးတယျ။ ဒါလညျး အငနျလြှော့လို့ ပွောရငျရမယျ ထငျတယျ။
အဲ့ခြိနျတှကျခလြိုကျတာက ဒီလောကျဆို တဈသောငျးခှဲလောကျပွေးမလှတျဘူးပေါ့နျော။ ယူထားတာက အသားတဈထုပျ၊ အသားခြောငျးတှခေညျြး ၁၀ခြောငျးကြျောတယျ။ အရှကျတှလေညျး ရှိသမြှအမြိုးအစားစားကောငျးတာ အကုနျယူတာ။ အပျမှိုက ၂ထုပျ။ ပုစှနျ ၄၀၀ တနျ၂ကောငျ။ ပုံမှနျဆိုငျဆို တသောငျးခှဲဝနျးကငျြပဲ။ ကိုယျ့အကွိုကျတှခေညျြးပဲကိုး။
လာခပြေးတော့ ပနျးကနျထဲမှာက ကွကျအူခြောငျး၊ အသားလုံးနဲ့အသားတှခေညျြးလေ။ ခေါကျဆှဲခညျြးတငျ ၂ထုပျ။ ဒါပမေယျ့ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ဘလျေတောငျးလိုကျမှ အမျ…ဟုတျမှဟုတျရဲ့လားလို့ မကျြလုံးပွူးရပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီအဝအပွဲ ၂ယောကျစာစားလို့ရတာကိုမှ ၆၂၀၀ တဲ့။ လုံးဝ မထငျထားတာနျော။
မကွိုကျတာကတော့ ဂငျြးဖတျကွီးတှနေဲ့ ကွကျသှနျဖွူဥအလုံးလိုကျကွီးတှပေါတာပါပဲ။ စားရတာ ဖယျနရေတာ အလုပျတဈလုပျကှယျ။ ပွီးတော့ဆိုငျကွီးတှကေ အစာသှပျအသားလုံးတှေ မရှိပါဘူးနျော။
အဲ့တော့မှ လူတှကြေိတျကြိတျတိုးနကွေတဲ့အကွောငျးရငျးသိတော့တယျ။ တကယျ တနျတာတော့တျောတျောတနျတာ။ သူ့ထကျတနျတာတောငျ သူ့လောကျမတနျဘူး။ အရသာကလညျး တျောတျောကောငျးတယျဆိုတဲ့ထဲပါတယျ။ နောကျပွီး သနျ့ရှငျးမှု။ တဈဆိုငျလုံးက ကယျြကယျြဝနျးဝနျးသပျသပျရပျရပျလေး။ ဝနျထမျးလညျးမြားတယျ။ စောငျ့ရတာတော့ နညျးနညျးကွာတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွနျရတာနဲ့တော့ စိတျခမျြးသာတယျပွောရမယျ။
Hot Pot တော့ မမွညျးခဲ့ရဘူး။ Hot Pot ဆိုရငျတော့ ယူထားတဲ့ အခြောငျးတှကေို အိုးထဲတခါတညျးထညျ့ခကျြပေးတာတဲ့။ တုတျထိုးဟော့ပေါ့ပုံမြိုးထငျတယျ။ မာလာရှမျးကောရော၊ Hot Pot ရော ၅၀၀၀ ဖိုးမကြျောရငျ အနှဈဖိုးနဲ့ အရညျဖိုး ၁၀၀၀ ကောကျတယျ။
ဆိုငျနာမညျက “Home Mala Xiang Guo နဲ့ Mini Hot Pot” ပါတဲ့။ လှညျးတနျး အမှတျ ၃၊ ဇယြောသီရိလမျး။ Iceberry ဘေးကပျရကျလမျးလေးထဲတငျ အဆုံးထိဝငျသှားလိုကျရငျ ဘယျဘကျခွမျးမှာရှိပါတယျ။ ဖုနျး-09251925955 ကိုကွိုဆကျပွီး နရောရှိမရှိ အရငျမေးနျော။
မာလာရှမျးကောကို အရသာရှိရှိ၊ဗိုကျလဲအဝ၊ ဘကျဂကျြမှစားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျတော့ “Home” ဆိုတဲ့ ဒီဆိုငျလေးကို အခရာကလညျး လုံးဝ Recommend ပေးပါတယျလို့။ ဒီရကျပိုငျးသှားမယျဆို နခေ့ငျးထမငျးစားခြိနျနဲ့ ညနရေုံးဆငျးခြိနျရှောငျပွီးသှားမှ နရောရမယျ့အခွအေနပေါ။ အဲ့၂ခြိနျကတော့ လူကြိတျကြိတျတိုးပဲ။
ယူတို့ လှညျးတနျးဘကျရောကျရငျ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အတနျဆုံးမာလာရှမျးကောကို အရသာရှိရှိ ဝငျစားကွညျ့လိုကျဦးနျော။